कर्नाटकका ५५ घण्टाका मुख्यमन्त्रीको कस्तो होला अनुभूति ? भारतीय राजनीतिका विचित्रहरु | Rajmarga
कर्नाटकका ५५ घण्टाका मुख्यमन्त्रीको कस्तो होला अनुभूति ? भारतीय राजनीतिका विचित्रहरु
भारतको कर्नाटक विधानसभामा शनिबार मत सावित गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री बी.एस. येदियुरप्पाले राजीनामा दिने निर्णय गरे। उनले राजीनामा दिएसँगै कर्नाटकमा बीजेपी सरकार ढल्यो। उनी करिक करिब ५५ घण्टा मुख्यमन्त्री रहे ।
विधानसभाको २२२ सिटका लागि निर्वाचनबाट आएको परिणाममा १०४ बीजेपी, ७८ कंग्रेस र ३७ स्थानमा जेडीएसले जित हात पारेका थिए । कंग्रेसले जेडीएसलाई समर्थन दिएको थियो तर राज्यपाल वजुभाई वालाले सबैभन्दा धेरै सिट प्राप्त गरेको पार्टी अर्थात बीजेपीलाई सरकार बनाउन आमन्त्रण गरे।
यो सबै घटनामा सर्वोच्च अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।येदियुरप्पाको सपथग्रहणलगत्तै सर्वोच्च अदालतले शनिबार दिउँसो ४ बजेभित्र भारतीय जनता पार्टीको कर्नाटक सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने आदेश दियो ।
तर भारतीय राजनीतिमा यस्तो रोचक घटना पहिलोपटक भएको भने होइन । भारतीय राजनीतिक इतिहासमा यस्तो धेरैपटक भएको छ।
सपथको १५ घण्टामै सरकार ढल्यो
देशमा संकटकाल लागु गरेको करिब दुई वर्षपछि विरोधको लहर तिब्र हुँदै गरेको देखेर प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लोकसभा भंग गरेर निर्वाचन गर्ने सिफारिस गरिन् । चुनावमा संकटकाल लागु गर्ने कंग्रेसको निर्णय घातक सावित भयो । ३० वर्षपछि केन्द्रमा कुनै गैरकंग्रेस गठबन्धन भयो ।
जनता पार्टी भारी बहुमतसहित सत्तामा आयो र मोरारजी देसाई प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि कांग्रेस र सीपीआईको सहयोगमा चरण सिंहले २८ जुलाई १९७९ मा प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिए ।
राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डीले उनलाई बहुमत सावित गर्नका लागि २० अगस्तसम्मको समय दिइन् । तर, एक दिन अघि अर्थात १९ अगस्तमै इन्दिरा गान्धीले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइन् र फ्लोर टेस्ट नगरिकनै उनले आफ्नो राजीनामा बुझाए ।
रथयात्रा रोकियो, दिल्लीमा सरकार ढल्यो
दोस्रो कथा पनि छ, १९८९ को । एक वर्ष पहिला अर्थात १९८८ मा जयप्रकाश नारायणको जन्मदिन ११ अक्टोबरका दिन जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल र कंग्रेस (एस) को विलय भयो र नयाँ पार्टी जनता दल गठन भयो ।
वीपी सिंहलाई जनता दलको अध्यक्ष चयन गरियो । उनको अगुवाईमा कयौ क्षेत्रीय दल एउटा झन्डामुनि आए र नेशनल फ्रन्ट गठन भयो ।
१९८९ मा चुनाव भयो । नेशनल फ्रन्टलाई राम्रो सफलता मिल्यो, तर त्यति होइन कि सरकार नै बनाउन सकोस । एक वर्ष मात्रै भएको थियो कि भाजपाले रथयात्राको सुरुवा गरेको थियो। रथ कयौ राज्य हुँदै बिहार पुगेको थियो । बिहारमा जनता दलकै सरकार थियो र लालुप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री थिए ।
उनले लालकृष्ण आडवानीको रथयात्राको गतिमा लगाम लगाइदिए र उनलाई पक्राउ गरे । फेरि के थियो, भाजापाले केन्द्र सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो र सरकार ढल्यो ।
गान्धीको जासुसीले ढल्यो सरकार
भारतीय राजनीतिको इतिहासको अघिल्लो पन्ना पल्टाऔं, सन् १९९० को कुरा हो । वीपी सिंहको राजीनामापछि जनता दलले नेता चन्द्रशेखरले आफ्ना समर्थकहरुसहित पार्टी छोडे र समाजवादी जनता पार्टी गठन गरे । १९९० मा चन्द्रशेखरले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाए ।
करिब सात महिनापछि यस्तो भयो कि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । २ मार्च १९९१ मा हरियाणा प्रहरीका जवान प्रेम स्रिह र राज सिंह राजीव गान्धीको निवास १० जनपथबाहिर जासुसीको आरोपमा पक्राउ परे । दुवै जना सादा पोशाकमा थिए र पक्राउ परेपछि उनीहरुले आरोप स्वीकार गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई राजीव गान्धीको सूचना संकलन गर्न पठाएको बताएका थिए ।
यही विषयलाई लिएर राजनीतिमा भूँइचालो आयो र कंग्रेसले केन्द्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिदियो । यसपछि संसदमा फ्लोर टेस्टको अवस्था आयो, फ्लोर टेस्ट हुनुअघि नै चन्द्रशेखरले सबैलाई आश्चर्यमा पार्दै ६ मार्च १९९१ मा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।
मायावतीको सत्ता मोह
यो फ्लोर टेस्टसम्बन्धी रोचक कथा हो उत्तर प्रदेशको । सन् १९९२ मा मुलायम सिंह यादवले समाजवादी जनता पार्टीबाट अलग भएर समाजवादी पार्टी गठन गरे । एक वर्षपछि उत्तमर प्रदेशमा विवादित ढाँचा ध्वस्त पारियो र राज्यको सत्तारुढ कल्याण सिंहको सरकारलाई विघटन गरियो ।
यसपछि चुनाव हुने थियो । समाजवादी पार्टी र मायावदीको बहुजन समाजवादी पार्टीको गठबन्धन भयो । यी दुई दलले मिलेर सरकार बनाए। यद्यपि गठबन्धनको यो सरकारले आफ्नो ५ वर्षको कार्याकाल पूरा गर्न सकेन ।
बसपाले आफ्नो समथृन फिर्ता लियो । उत्तर प्रदेश विधानसभामा फ्लोर टेस्ट भयो र भाजपाको समर्थनमा मायावतीको सकारकार बन्यो र समाजवादी पार्टी स्वयमलाई ठगिएको महशुस गर्दै सरकारबाट बाहिर निस्कियो ।
जब एक भोटले सरकार ढल्यो
सन् १९९८ मा लोकसभा चुनाव भएको थियो । चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेनन् । तर अन्नाद्रमुकको सहयोगमा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धनले केन्द्रमा सरकार बनायो ।
संसदमा फ्लोर टेस्ट भयो र अटल विहारी वाजपेयीको सरकार एक भोट नपुग्दा ढल्यो । यस्तो हुने आशंका भने कसैले गरेका थिएनन् । जुन एक भोटले सरकार ढल्यो त्यो भोट थियो ओडिशाका मुख्यमन्त्री गिरधर गमांगको । गमांग त्यतिबेला ओडिशाका मुख्यमन्त्री थिए र सांसद पनि । उनी यो फ्लोर टेस्टमा आफ्नो भोट हाल्न विशेष रुपले दिल्ली आएका थिए । बीबीसी हिन्दी
Previous post: नयाँ सर्भेको परिणामः संसारबाट यसरी एक्लिदैछ अमेरिका, रुस र चीनतिर सबैको आँखा
Next post: आईपीएलमा आज सन्दिपको अन्तिम खेल, कस्तो रहला प्रदर्शन ?
तरकारीको मूल्य अनियन्त्रित भएसँगै बिहानै कालिमाटी र बल्खुमा अनुगमन
नेकपामा विभागीय नेतृत्व टुङगो लगाउन आज छलफल हुँदै, स्कुल विभाग अध्यक्षले राख्ने